Umzi mveliso wePotle wasePotle kunye nabaVelisi | UChuancheng
Ifanelekile ekuphekeni kwakho nakwizithako zokubhaka ezinje ngepasta, i-penne, iimbotyi ezomileyo, irayisi, irhasi, i-Cracks, ikofu, iti, amantongomane okanye ukugcina imifuno yakho oyithandayo, iziqhamo kunye nemifuno kunye nejam. Igumbi lethu lekhitshi leglasi yokucwangcisa ilungile kakhulu ukuze ivuthwe.
Ukutya okugciniweyo kuya kuhlala kusitsha ixesha elide kunye nesivalo se-airtight kunye nesitshixo segasket ye-silicone. Iglasi ecocekileyo ikuvumela ukuba ubone okungaphakathi kunye nendlela ukutya okugciniweyo okuqhubeka ngayo.
Imbiza yonke yenziwa ngezinto ezikumgangatho wokutya, ezinzileyo kwaye zinokuphinda zisebenze, zicocekile kwaye zingenabungozi, aziyi kuvuza iikhemikhali eziyingozi kukutya okanye zifumane iincasa emva kokusebenzisa ezininzi.
Ilungile ngokuKhenwa-Ifanelekile yokugcina nokugcoba abathanda; Le mbiza yokubhabha yenzelwe kwaye yalingana ukulungiselela ukuhanjiswa kweapile ezenziwe ekhaya, iiperesi, ipepile, iijellies, izilondolozi, iisosi zetamatato, isalsa, umhluzi nezinye izinto ezahlukeneyo.
Ilungile ekuGcinweni-Inobuhlobo kunye nokugcinwa kokuphinda kubuye ukutya okomileyo kunye nokutya okuneeswekile, irayisi, ioyile, umgubo, ipasta, ikuki, iileyile, kunye neelekese. Isivalo se-airtight yensimbi sihambelana ne-bpa-free-plastisol yesitywina esomeleleyo esigcina ukutya kukutsha kwaye kwandisa ubomi bayo. Imbiza sisixhobo esihle kakhulu sombutho sayo nayiphi na into evulekileyo oyifunayo yokugcina ngendlela erustic.
Umlomo oQhelekileyo-Umlomo wobubanzi be intshi obuyi-2 makes wenza kube lula ukubeka iziqhamo kunye nemifuno enje ngeebhetshu kunye neetamatato embizeni. Ukuvulwa okubanzi kuvumela ukufumaneka ngokulula emazantsi embiza ukulungiselela ukucoceka ngokulula nangokucokisekileyo ngesandla ngesiponji.
Umgangatho weglasi- owenziwe ngeglasi yeelayisi ezikumgangatho ophezulu oxhathisa ukuqhekeza kunye nokwaphula. Iglasi yethu ihlanze izitya ikhuselekile kwaye ikhuselekile ngaphandle kwesivalo. Le jar yeglasi ikhuselekile kukutya oku-100% kwaye akukho sikhokelo ekugcinweni kokutya okusempilweni kunye nokusela isiselo.
Iglasi ecacileyo-iglasi nganye ye-mason yeglasi yenziwa ngekristali ecacileyo, engenasiphako yeglasi yokuqinisekisa ukubonakala okuphezulu okunokuvumela ukuba ubone iziqulatho zejelly jry kwaye ubone ukuba zikhutshiwe. Ezi mbiza zigudileyo zikwindawo efanelekileyo yokuhombisa ngezinto zokuhombisa nezobugcisa, ezomtshato nezomtshato, kunye nezinye iiprojekthi ze-DIY.
Edlulileyo: Ibhotile yobusi
Okulandelayo: Iinkonkxa zePipi
Iibhotile zeglasi zee-Pickles
Iiglasi zeglasi yokubhabha
Iglasi yePleyiti yesitya
Iijeketi zokuGcina izilwanyana
I-130ml yeglasi yetyuwa kunye nepepile yee-spices shiny
Manual Abrader Ikhitshi Grinder Jar Glass Umzimba S ...
Ipepper Grinder okanye iSalt Shaker
I-Crystal Candy Jar ene-Lid, Cofa isitya sokutya seGlasi ...